Umhlahlandlela Wokuqeqesha Oyisisekelo Wabaqalayo | Bezzia
Umhlahlandlela Wokuqeqesha Oyisisekelo Wabaqalayo
UToñy Torres | 26/06/2021 18:00 | Ukuzivocavoca
Ngalesi siqondisi esiyisisekelo sokuqeqesha abaqalayo, ungaqala ukuzivocavoca ngendlela efanele futhi enempilo. Ngoba ukuqala ukudlala ezemidlalo akuyona into okufanele yenziwe kalula, ngoba ikhona ubungozi bokulimala kanye nokushiya ngaphambi kwesikhathi ngokuba nokulindela okuphezulu kakhulu. Uma ungenayo (noma ungafuni) ithuba lokuba nomqeqeshi, lo mhlahlandlela ungowakho.
Lapho usuthathe isinqumo sokufuna ukuphila ngokuzikhandla, noma ngabe kungenxa yempilo yakho, ukufuna ukubukeka kangcono emzimbeni, noma ngoba nje wazi ukuthi unempilo, sekuyisikhathi sokuthola ukuthi ungaqala kuphi. Ngalezi zeluleko, uzothola yiziphi izivivinyo ezinhle kakhulu, isikhathi ukuthi kufanele uzijwayeze nokuthi ungakwenza kanjani kahle.
1 Ukuqeqeshwa kwabaqalayo
1.1 Ukuqala kuphi
1.2 Yiziphi izivivinyo okufanele uzenze
1.3 Uhlela kanjani izivivinyo
Okokuqala kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma unezinkinga zempilo noma ukukhuluphala okukhulu, kufanele thintana nodokotela wakho ukugwema izinkinga etholakala ekuzivocavoca okungafanelekile kuwe. Kodwa-ke, lo mhlahlandlela wabaqalayo ulungele abantu banoma ibuphi ubudala, ubulili, nesimo somzimba. Noma ungakaze uzijwayeze ezemidlalo ngaphambili, ngalezi zeluleko uzofinyelela kuzo zonke izinhloso zakho.
Impela uzwile abantu bekhuluma ukuthi ngelinye ilanga baqeqesha isifuba, eminye imilenze, ezinye izingalo, njll. Futhi impela yonke into izwakala ikude kangangoba awazi ukuthi ngabe yini okufanele uyenze nokuthi uqale kuphi. Uma uqala kwezemidlalo, into ebaluleke kakhulu ukufeza ukuqhubeka. Okungukuthi, kubaluleke kakhulu ukuzivocavoca umzimba njalo, kunokulandela inqubo eqinile kakhulu ngezikhathi ezithile.
Qala ngokuzivocavoca izikhathi ezi-3-4 ngesonto, zonke ezinye izinsuku ukunikeza umzimba wakho isikhathi sokululama. Akudingeki nokuthi wenze izivivinyo eziningi ukuqala ngazo, u-5 noma u-6 ungaphezu kokwanele. Ungaphinda inqubo efanayo inqobo nje uma uzizwa ukhululekile ngayo. Uzoba nesikhathi sokwandisa imvamisa nokuzivocavoca umzimba.
Yiziphi izivivinyo okufanele uzenze
Lapho uqala ngezinsuku ezimbalwa zokuqeqeshwa kanye nokuzivocavoca okumbalwa, kubalulekile ukukhetha inqubo ekuvumela ukuthi uthole imiphumela emihle. Uma usaqala, esikhundleni sokukhetha izivivinyo ngemisipha, sizozihlukanisa ngamaqembu. Lokho wukuthi, kufanele ukwenze ukuphusha, ukudonsa, ukuvivinya emuva nangemuva kokuzivocavoca kwesisu.
Kunezinhlobo eziningi zokuzivocavoca ukukhomba lawo maqembu emisipha, kodwa lezo ezinikeza imiphumela eminingi ngomsebenzi omncane (okufunayo ekuqaleni) yilokhu okulandelayo.
Ukuzivocavoca, amahlombe, ama-triceps nesifuba kuyasetshenzwa. Yilezo lapho, njengoba igama liphakamisa, icindezelwa ngamandla. Isibonelo, ukucindezela kwebhentshi, ukucindezela kwamahlombe, noma ama-push-ups.
Ukudonswa, okusetshenziswa emuva, amahlombe nama-biceps. Ukuzivocavoca okuhle kunakho konke irowu, izilevu noma indawo yokudonsa ejimini.
Sebenza umlenze ongemuva, izivivinyo ezisebenza imisipha kanye ne-glutes. Zama i-kettlebell deadlift.
Ukuzivocavoca umlenze wangaphambili, okungukuthi, i-quadriceps. Ukuzivocavoca okuphelele kunemiphumela emihle kakhulu ngama-squats namaphaphu.
Ukuzivocavoca ukusebenza kwesisu. Kwabaqalayo kanye nochwepheshe, ukuzivocavoca okuphelele kakhulu yipulangwe lesisu.
Uhlela kanjani izivivinyo
Indlela elula yokuqala ukwenza itafula ngezinhlobo ezimbili ezahlukene zemizila bese uyishintsha ngezinsuku zokuqeqesha. Kubaluleke kakhulu ukuthi phakathi kwesimiso ngasinye shiya usuku lokuphumula phakathi, okungenani ekuqaleni lapho uqala ukuziqeqesha. Ukuphela kwendlela yokuthuthuka ukungaguquguquki, njengoba uqeda izindlela zakho futhi uqedela izinsuku zakho zokuziqeqesha, umzimba wakho uzokutshela ukuthi ukulungele ukudlulela ezingeni elilandelayo.
Ukulungisa ingqondo yakho ukufeza izinhloso zakho kubalulekileikakhulukazi lapho uqala ukuzivocavoca umzimba. Imiphumela ayenzeki ngokushesha futhi ukungayiboni maduze kungaholela ekushiyweni ngaphambi kwesikhathi. Sebenzela emandleni akho engqondo, kuzosiza kakhulu ukwenza ukuzindla okuqondisiwe nsuku zonke. Ngalesi siqondisi esiyisisekelo sokuqeqeshwa kwabaqalayo, ungaqala uhambo lwakho lokuya empilweni enempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Umhlahlandlela Wokuqeqesha Oyisisekelo Wabaqalayo
Ukholifulawa ukhilimu wekhari nge-almond cream
Ungazihlanza kanjani izihlungi zomoya